ပုံမှန် ဝင်ငွေ ရှိပြီး လက် ထဲ မှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများ အတွက် ဒါလေတွေ လုပ် လိုက် ပါ အိုကေသွား လိမ့်မယ်နော်.. – GaMone Media
Homepage / Knowledge / ပုံမှန် ဝင်ငွေ ရှိပြီး လက် ထဲ မှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများ အတွက် ဒါလေတွေ လုပ် လိုက် ပါ အိုကေသွား လိမ့်မယ်နော်..
ပုံမှန် ဝင်ငွေ ရှိပြီး လက် ထဲ မှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများ အတွက် ဒါလေတွေ လုပ် လိုက် ပါ အိုကေသွား လိမ့်မယ်နော်..
ပိုက်ဆံ စုတယ် ဆိုတာ ရည်မှန်းချက် တစ်ခု ထားပြီး ရေရှည် တည် ဆောက် ထား သင့်တဲ့ အလေ့အကျင့် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… ။ ငွေကြေး အောင် မြင်မှုမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် ဝင်တယ် ဆိုတာထက် ဘယ်လောက် စုနိုင်တယ် ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်… ။
လူတွေက မဝင်သေးတဲ့ ပိုက်ဆံ ကို မျှော်ကိုးပြီး အကြွေး ယူတတ် ကြတယ်… ။ ဒါက အဓိက မှား ယွင်းနေတဲ့ အချက်ပဲ… ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ပိုက်ဆံစုနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လို ဗျူဟာတွေ သုံးရမလဲဆိုတာ အချက်ကျကျ တင်ပြချင်ပါတယ်. . . ။ ။
လစာထုတ်တာနဲ့ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ပြီးမှ ပိုက်ဆံ စုတတ် ကြတယ် ။ တကယ်တမ်းတော့ လစဉ် စုဆောင်းမယ့် ပိုက်ဆံပမာဏကို သတ်မှတ်စုဆောင်းပြီးမှသာ လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဝယ်သင့်ပါတယ် ။စာထုတ်တာနဲ့ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက စုဆောင်းမယ့် ပိုက်ဆံ ကို သီးသန့် ချန်ထားသင့်ပါတယ် ။
ဆယ်သိန်းလောက်ရှိတဲ့ ( i P h o ne) ဝယ်မယ့်အစား အတန် အသင့် သုံးလို့ကောင်းတဲ့ နှစ်သိန်းတန် စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးကို ဝယ်ပြီး ကျန် တဲ့ ရှစ်သိန်းကို စုဆောင်းလိုက်တာက ပိုအဓိပ္ပာယ် ရှိပါတယ် ။နာမည်ကြီး တံဆိပ်ရဲ့နောက်မှာ လိုက်နေတာထက် အရည်အသွေး ကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းကို သုံးသင့်တဲ့ သဘောပါ ။ဆိုင် ထိုင်မယ်ဆိုရင် နာမည်ကြီးဆိုင်မှာ ထိုင်တာထက် အစားအသောက်ကောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ ထိုင်တာက ပိုအရသာရှိသလို ငွေကုန်လည်း သက်သာစေပါတယ် ။
အအေးဘူး ဝယ်သောက်လိုက်လို့ ငါးရာပဲကုန်တာ တစ်ခါတလေမှာ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ကြိမ်ဖန်များလာရင် “ ဆိတ်ဖန်များ အနာဖြစ် ” တတ်ပါတယ် ။ဥပမာ – စတိုးဆိုင်တွေက ပေးလိုက်တဲ့ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်တွေကို လွှင့်မပစ်ဘဲနဲ့ အမှိုက်ထည့်တဲ့ အိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အမှိုက်အိတ်ကုန်ငွေ သက်သာတဲ့သဘောပါ ။
၄။ နှစ်ပတ်စောင့်တဲ့ ဗျူဟာ သုံးကြည့်ပါ…
ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ချက် ချင်း မဝယ်သေးပါနဲ့ဦး ။ နှစ်ပတ်လောက် စောင့်လိုက်ပါ ။ နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့မှ ကိုယ်ကလည်း တကယ် လိုချင်တယ်နေတယ် ၊ ပစ္စည်းကလည်း လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့မှ ဝယ်လိုက်ပါ ။စောင့်နေတဲ့ အတောအတွင်းမှာ တခြား လူဝယ်လို့ ကုန်သွားမှာ စိတ်မပူ ပါနဲ့ ။ ပိုကောင်း ပိုလှတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဆိုင် မှာ ရောက်နေပါပြီ ။
ကိုယ့်အလုပ်ဟာ အင်တာနက် နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူး ဆိုရင် တစ်နေ့မှာ တစ်နာရီထက် ပိုမသုံးပါနဲ့ ။ အင်တာနက် ကို ရိုးရိုး သုံးတာထက်စာရင် ။
လူတွေဟာ ကိုယ့်အတွက် တကယ်မလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကိုမှ လိုချင်နေမိ တတ်တယ် ။ “ မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေကို ဝယ်မိရင် လိုအပ်တာ တွေ ထုတ်ရောင်းရမယ် ” ဆိုတဲ့ ဝါရင့်ဘန့်ဖတ်ရဲ့ စကားအတိုင်းပဲ ဆန္ဒနောက် မလိုက်မိပါစေနဲ့ ။နောက်ဆုံး အရေးကြီးတာက ပိုက်ဆံ စုတဲ့အခါမှာ ရည်မှန်းချက်ထားပြီး စုတတ်ဖို့ပဲ ။ ရည်မှန်းချက် ထားပြီး ပိုက်ဆံစု တာက ပိုအဓိပ္ပာယ် ရှိသလို ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ပြီး လျှောက် လှမ်းတဲ့ ဘဝဟာ အနှစ်သာရ ပြည့်ဝနေတာပေါ့.
Previous post စည်းလုံးမှု နဲ့ မျှော်လင့်ချက် တွေ ခိုင်မာပြီး သားမို့ အောင်မြင်ခြင်းဟာ ကိုယ်တွေ လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ ဒေါင်း
Next post မြန်မာပြည်သူတွေ ခံစားနေရတာ ကို စာလေးတွေ နဲ့ အားပေး စကားပြောပြီး တစ်သားတည်း ရပ်တည် ပေးခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတချို့